ဖိနှိပ်ခံရလုို့ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့သာသနာဆိုတာ လောကမှာ ရှိသလား လူမုိုက်တုို့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Burma is Progressing, except on the Road to Peace & Democracy
ဦး ၀ီရသူနဲ့ ဦး ပါမောက္ခကို ဘုန်းကြီးလို့ မထင်တော့ဘူး လူ… လူတောင်မှ လူကောင်းလို့ မထင်ဘူး ဒုစရိုက်သမား လူဆိုးတွေ »
ဖိနှိပ်ခံရလုို့ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့သာသနာဆိုတာ လောကမှာ ရှိသလား လူမုိုက်တုို့
U Aung Tin. October 8, 2014 at 9:24pm
အုိုစာမာဘင်လာဒင်နှင့် နုိုင်းဝမ်းဝမ်းဆုိုတာ ကမ္ဘာကုိုကုိုင်လှုပ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သော သမုိုင်းဝင် အဖြစ်အပျက်ကြီးဖြစ်တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆုိုးကြောင့် အနောက်နုိုင်ငံတွေရဲ့ သူရဲကောင်း မင်းသားတစ်ပါး(Darling) ဖြစ်ခဲ့သူ အုိုစာမာဘင်လာဒင်လည်း ပီဘိ ရာဇဝင်လူဆုိုးကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
နုိုင်းဝမ်းဝမ်းအပါအဝင် အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှသည် အစ္စလာမ့်သင်ကြားချက်နဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်တာမုို့ ကျနော်တုို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
သုို့သော် နုိုင်းဝမ်းဝမ်းကုို အကြောင်းပြုပြီး အစ္စလာမ်သာသနာ တရပ်လုံးနှင့် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်ထုတစ်ခုလုံးကုို လူ့သမုိုင်းမှာ အမြင့်ဆုံးသော ပုံဖျက်မှု၊ အသရေဖျက်မှုကြီးကလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီ။
ကုိုလံဘီယာတက္ကသုိုလ်က ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတွေးခေါ်ရှင်(World Leading Thinker) မွတ်စလင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Mahmood Mamdani က နုိုင်းဝမ်းဝမ်းပြီးနောက် နယူးယော့တုိုင်းသတင်းစာအရ ကုရ်အာန်က အမေရိကမှာ အရောင်းရဆုံး Best Seller အဖြစ် ကာလရှည်ကြာစွာ ရပ်တည်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲဆုိုတာကုို မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
မွတ်စလင်တွေ လေယာဉ်နဲ့ တုိုက်ခုိုက်ခံရတာ ဘာကြောင့်လဲဆုိုတာ အမေရိကန်နုိုင်ငံသားတွေက ကုရ်အာန်ကုို အလုအယက်ဖတ်၊ အဖြေရှာခဲ့ကြပေမဲ့၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ကုို ခရစ်ယာန်အမေရိကန်က ဗုံးကြဲတုိုက်ခုိုက်တော့ အာဖဂန်တွေက ဘာဖြစ်လုို့ ဘိုင်ဘယ်လ်ကုိုဖတ်ပြီး အဖြေမရှာခဲ့ကြတာလဲဆုိုတာကုို စဉ်းစားခုိုင်းပါတယ်။
အနောက်နုိုင်ငံတွေက အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေလည်း အစ္စလာမ်ကုို တုိုက်ခုိုက်ဖုို့ အချက်အလက်တွေ ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ ဖအေတင်မက သားပါ မွတ်စလင်ဖြစ်လာတယ်။ ခရူးဆိတ်ဒါ အမေရိကန်သမ္မတ ဘွတ်ရ်ှရဲ့ သွေးသောက်ကြီး အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ် တုိုနီဘလဲယားရဲ့ ခယ်မကလည်း ရဲရဲတောက် မွတ်စလင်ဖြစ်လာတယ်။
အခုမြန်မာပြည်မှာလည်း အစ္စလာမ်မကောင်းကြောင်း ပွဲခံထုိုးနှက်ကြရင်း မွတ်စလင်ဖြစ်လာကြမှာကုို မြင်ယောင်မိတယ်။
အလ္လာဟ်သျှင်က ပြောပါတယ်။ ငါအလုိုရှိရင် သင်တုို့လူသားအားလုံးကုို မွတ်စလင်အဖြစ် ငါအသျှင် ပြောင်းလဲပစ်နုိုင်တယ်။ သင်တုို့အားလုံးကုို ဖရစ်ရ်ှတာ(နတ်ဒေဝတာ)တွေလို အကုသုိုလ်ဒုစရုိုက်မှန်သမျှ ရှောင်ကြဉ်သူအဖြစ် ငါဖန်တီးနုိုင်တယ်။
သုို့သော် ငါအလုိုရှိတာက အမှားနဲ့ အမှန်၊ လမ်းမှားနဲ့ လမ်းမှန်ကုို သင်တုို့ကုိုယ်တုိုင် ရွေးချယ်ခြင်းကုို လုိုလားတယ်။ လောကရဲ့ မာယာတွေ၊ လှည့်စားမှုတွေကုို သင်တုို့အသိညာဏ်နဲ့ ရှောင်ရှားပြီ လမ်းမှန်ကုို ရွေးလျှောက်နုိုင်တဲ့ ခွဲခြားနုိုင်ခြင်း အသိကုိုပေးအပ်ထားခြင်း ခံရတဲ့အတွက် လူသားတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းသည် ဖရစ်ရ်ှတာလုို့ခေါ်တဲ့ နတ်ဒေဝတာတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းထက် ပုိုမြင့်စေခဲ့တယ်။
လမ်းမှန်ကုို ရွေးလျှောက်နုိုင်သူတွေ အောင်မြင်မှု ရကြမယ်။
အမှားအမှန်ကုို မခွဲခြားနိုင်ဘဲ လမ်းမှားလျှောက်သူတွေသာ နစ်နာဆုံးရှုံးသူဖြစ်ကြမယ် လို့ဆုိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘာသာခြားတွေ မွတ်စလင်ဖြစ်လာရင်လည်း အစ္စလာမ်အတွက်ထူးပြီး ဝမ်းမသာပါဘူး။ ပြောင်းလာသူအတွက်သာ လမ်းမှန်ရောက်သွားပြီဆုိုပြီး ဝမ်းသာမှာပါ။ အစ္စလာမ်အတွက် မဟုတ်ဘူး။
မွတ်စလင်တွေက အခြားဘာသာပြောင်းသွားလည်း အစ္စလာမ်အတွက်ထူးပြီး ဝမ်းမနည်းဘူး။ ပြောင်းသွားသူအတွက် လမ်းမှားရောက်သွားလုို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါ။ အစ္စလာမ်က ဘာမှနစ်နာသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
အစ္စလာမ်သာသနာသည် မှန်ကန်တဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်သာသနာ ကွယ်ပျောက်သွားမှာ ကြောက်တဲ့မွတ်စလင် ကမ္ဘာမှာ တစ်ယောက်တောင် မရှိပါဘူး။ ကျနော်တုို့သာသနာအပေါ် ကျနော်တို့ ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပလီတွေကုို လူစုလူဝေးနဲ့ ဖျက်တယ်။ အဖျက်ခံရတဲ့ ပလီတွေကုို အစုိုးရက ချိတ်ပိတ်ပေးတယ်။ ပြန်ဖွင့်ခွင့် မပေးဘူး။ ပြူပြင်ခွင့် မပေးဘူး။ မွတ်စလင်လူဦးရေ တုိုးတက်လာတာနဲ့အညီ ပလီသစ်တွေ ဆောက်ခွင့်မပေးဘူး။
အဲဒီလုိုလုပ်လုို့ မွတ်စလင်တွေ ကွယ်ပျောက်လာသလား။ လျော့နည်းသွားသလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကူးပြောင်းသွားသလား။ အခြားသာသနာကုို ကူးပြောင်းသွားကုန်လား။
မွတ်စလင်တွေက အရင်ကလုို မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။ ဘာသာရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ပုိုပြင်းလာသလုိုဘဲ။
အရင်က ဦးထုပ်မဆောင်းသူတွေ ဦးထုပ်ဆောင်းလာတယ်။ မုတ်ဆိပ်တွေလည်း ထားလာကြတယ်။ အကျီရှည်တွေလည်းဝတ်ကြတာ အများကြီးဘဲ။ ပလီဆုိုရင်လည်း လူတွေပြည့်နေတာဘဲ။
အမျိုးသမီးတွေလည်း ပုဝါဆောင်းကြတာ ပုိုများလာတယ်။ အရင်က လုံးဝမမြင်ဖူးတဲ့ တစ်ကုိုယ်လုံးကုို ခြုံထားတာတွေတောင် တွေ့နေရပြီ။
ဘာကြောင့်လဲလို့ လူတွေက မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ၁၉ ၆၂မှာ အာဏာသိမ်းတဲ့ တရုပ်စစ်ဗုိုလ် ဗုိုလ်နေဝင်း တစတစ မွတ်စလင်တွေကုို ပုိုပြီးခွဲခြား မဖိနှိပ်လာခင် ကာလက မြန်မာမွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ နုိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အခမ်းအနားတွေ၊ ချီတက်ပွဲဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ အားလုံးကုို ပြန်လေ့လာပါ။ တုိုက်ပုံဝတ်သူတွေ၊ ရင်ဖုံအင်္ကျီဝတ် ပုဝါမခြုံတဲ့ မွတ်စလင်အမျိုးသား အမျိုးသမီး အများအပြားကုို တွေ့ရမယ်။ ဦးထုပ်ဆောင်း၊ အင်္ကျိရှည်ဝတ်၊ မုတ်ဆိပ်ထား၊ ပုဝါခြုံတဲ့ မွတ်စလင်ဆိုတာ မရှိသလောက်တောင် ရှားခဲ့တယ်။ ဒါက ခိုင်မာတဲ့ သမုိုင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted on October 8, 2014 at 1:46 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.